ब्लग/विचार – Page2– दाङ खबर
May12019 by DangkhabarNo Comments
मानबहादुर बुढा, अध्यक्ष, गोर्खा ग्रुप प्रालि दाङ सहित राप्तीका लाहुरेहरुले सञ्चालन गरेको गोर्खा ईन्टरनेशनल सेकेण्डरी स्कूल जिल्लाकै चर्चित नीजि स्कूलहरु मध्य पर्छ । शिक्षाको आवस्यकता महसुस गर्दै लाहुरेहरुले घोराही सहित तुलसीपुर र लमहीमा पनि स्कूल सञ्चालन गरे । स्कूल मात्र नभई घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा कलेज पनि सञ्चालनमा छ भने घोराहीमा गोर्खा हस्पिटल पनि सञ्चालन भैरहेको छ । यी सम्पूर्ण निकायहरुको छाता संगठनको रुपमा गत वर्ष मात्रै गोर्खा ग्रुप प्राली निर्माण भएर थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैछ । गोर्खा गु्रपलेवैशाख १९ गते विहिबारदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । गोर्खा ग्रुपका शेयर होल्डर सहित विभिन्न ब्यक्तिहरु सहभागी हुने ‘गोर्खा ग्रायण्ड एसेम्बली २०१९’ र गोर्खा गु्रपको बारेमा अध्यक्ष मानबहादुर बुढासँग गरिएको कुराकानी : विहिबारदेखि ‘गोर्खा ग्रायण्ड एसेम्बली २०१९’ नाम दिए
Apr252019 by DangkhabarNo Comments
अनिरुद्ध गौतम/नेपालमा लोकतन्त्र घोषणा भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो । २०६३ वैशाख ११ गते आजैका दिन लोकतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सुरु भएको लोकतन्त्रको यो १३ वर्षमा नयाँ संविधानमार्फत देश संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । जहानियाँ राणा शासन, प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली समाजका राजनीतिक यात्राका अविस्मरणीय सृङ्खलाहरु हुन् । यिनैमध्ये एक लोकतन्त्रबारे हरेक वर्ष स्मरण गरिन्छ । २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्यसँगै स्थापना भएको लोकतन्त्रमार्फत नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर, प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता, मानव अधिकारको सुरक्षा, न्यायिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूतिको ग्यारेण्टी गर्ने उल्लेख गरियो । अब वंशीय परम्परा अर्थात राजा ह
Mar42019 by DangkhabarNo Comments
सम्झनाकाे तरेलीमा मन्त्री अधिकारी
विपिन घिमिरे/ मृत्यु शास्वत पक्ष हो । जन्मेपछि मृत्यु, उदाएपछि अस्ताउनु अनिवार्य छ । यी प्रकृतिका अनिवार्य नियम हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै मृत्युले यति धेरै चोट दिँदा रैछन् । मथिङ्गल हल्लाउँदा रैछन् । भुल्न खोज्दा पनि भूल नसकिने, सम्हालिन्छु भन्दा सम्हालिन नसकिने हुँदा रैछन् । अफिसमै छु । कामको चाप आज पनि उस्तै छ । फागुनको मध्य दिन, अत्यधिक चिसो बढेको छ । चियाको तलतलले सताउँछ । अनि निस्कन्छु–क्यान्टिनमा । त्यहाँ भेटिन्टन्–मजस्तै चिया पारखीहरु । फुर्सदमा मोवाइल खेलाउने मेरो पुरानै बानी छ । आज नि उही कर्म दोहोरिन्छ । फेसबुक खोल्छु । साथीहरुका पोष्टमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्दै अघि बढ्छु । यस्तैमा मन झस्काउने खबरले म बिथोलिन्छु । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको खबरले फेसबुकभर छरपस्टिएको भेटाउँछु । चिसाको चुस्किमा हराउने म अ
Feb272019 by DangkhabarNo Comments
काठमाडौं फागुन १५ । ताप्लेजुङको फुङलिङमा बुधबार मध्यान्ह भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी तत्कालिन नेकपा एमाले ( वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-नेकपा)का प्रभावशाली नेता मानिन्थे। कास्कीको भरतपोखरी गाउँमा २०२६ साल बैशाख २२ गते जन्मिएका अधिकारी अखिल नेपाल स्वतन्त्र विधार्थी युनियनको प्रारम्भिक कमिटी अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, गन्डकी अन्चल अध्यक्ष, पृथ्वि नारायण क्याम्पस स्वतन्त्र विधार्थी युनियन-स्ववियू सभापती, त्रिभुवन विश्वविधालय केन्द्रीय क्याम्पस,कीर्तिपुर स्ववियू सभापती हुँदै कास्कीबाट लगातार तेस्रोपटक सांसद निर्वाचित भएका हुन्। कास्कीको शान्ती उदय मावीबाट एसएलसी पास गरेका अधिकारी व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर हुन्। २०४२ सालमा पृथ्वी नारायण क्याम्पसमा भर्ना भएका उनी त्यसको दुई वर्षपछि उक्त क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी अध्यक्ष भ
Feb62019 by DangkhabarNo Comments
खानेपानीभित्रका विकृति अन्त्यका लागि मेरो उम्मेदवारी-दुर्गा खत्री
(दुर्गा खत्री सदस्य पदका उम्मेदवार घोराही खानेपानी तथा सरसफाई संस्था) दुर्गा खत्री दाङको घोराही क्षेत्रका सफल युवा हुनुहुन्छ । स्वच्छ, इमान्दार छवि भएका खत्री समाजमा उदाहरणीय युवाका रुपमा आफ्नो परिचय बनाई सक्नुभएको छ । घोराहीका एक दर्जन बढी संघसंस्थामा आवद्ध भएर सफल व्यक्तित्वको परिचय दिइसक्नुभएका खत्री यही माघ २६ गते हुन गइरहेको घोराही खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको आसन्न निर्वाचनमा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । प्रस्तुत छ यसै सेरोफेरोमा रहेर खत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप । सम्पादक घोराही खानेपानीमा यहाँको उम्मेदवारी किन ? दाङको घोराहीमा दिनप्रतिदिन जनघनत्व बढिरहेको छ । यहाँको जनघनत्वलाई थेग्ने खानेपानीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि एउटै नेतृत्वले निरन्तरता पाइरहेका कारण जुन रुपमा खानेपानीका लागि पहलकदमी हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा घ
Jan282019 by DangkhabarNo Comments
आदरणीय डा गोविन्द केसीज्यू तपाईंले विगतमा गर्नुभएको अनसनप्रति म कहिल्यै नकारात्मक थिइन । अहिलेको अनसनप्रति पनि म नकारात्मक छुइन । देश र समाजको भलाईको कुरा आउँदा म पार्टीगत धारणामा मात्र बाँधिन सक्दिन । त्यही भएकाले मैले भन्ने गरेकी छु– देश र समाजका लागि पार्टीभन्दा माथि उठौं । जहिले पनि पार्टीभन्दा देश माथि हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहिआएको छ । डाक्टरसाब, तपाईं व्यक्तिगत लाभहानी र स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुहुन्छ भन्ने सुनेकी छु । म सांसद पदमा छु । मेरा पनि वरिपरी निजी स्वार्थका लागि लागिपरेकाहरु आइपुग्छन्, तिनलाई पहिचान गर्ने प्रयास गर्छु । को मानिस देश र समाजको भलाइका लागि मेरो उपयोग गर्न चाहन्छन्। को निजी हितमा मेरो उपयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने ठम्याउन नसकेर म कतिपय ठाउँमा अप्ठेरोमा पनि परेकी छु । शायद तपाईंलाई पनि यस्तो अप्ठेरो धेरै पटक आइलागेको हुनसक्छ । अहिले तपाईं यस्तै अप्
Jan72019 by DangkhabarNo Comments
गोविन्द खड्का-टिरर्र, टिरर्र सवारीको हर्न बज्ला, नजिकै रहेको टाफिक प्रहरीले सिरर्र, सिरर्र सिठि मार्ला अनि जरिवानाको रसिद निकालेर रकम ठटाउला । पसिना पुच्छदै चालकले हजार, पाँच सयका नोट बुझाउला । त्यसबेला घरका जहान परिवार र वैँकको किस्ता सम्झिएर चालकले कटक्क मन दुखाउला । अहिलेकै अवस्थामा नो हर्न लागुगरे यो अवस्था हेर्न आलेख तयार भएको १५ दिन कुर्नुपर्छ । उसले नो हर्न क्षेत्रमा आवाज दिएकाले जरीवाना तिर्ने छ । नियम उल्लंघन गरेको आधारमा प्रहरीले रकम असुल्ने छ । यो प्रकृयागत हिसावले उचित ठरीएला । प्रहरी जागिरका लागि असुल्ने छ, चालक वाद्यताले जरिवाना तिर्ने छ । उनिहरु दुवैथरीले बुझ्नुपर्छ हर्न म्युजिक होईन । संकेत हो, सवारी नजिक आएको सुचना दिन्छ । घुम्ती र वाटो क्रस गर्न लागेको जानकारी गराउँछ । आफ्नो अगाडिको अवरोध हटाउन सहचालकलाई अह्राउछ । दुईटै कानमा एरफोन घुसारेर आफ्नै धुनमा सवार गर्नु वयस
Jan12019 by DangkhabarNo Comments
तपाईंले भर्खरै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानका लागि देशैभर हजारौं–हजार केपी ओली जन्माउनु पर्छ, हर क्षेत्रमा स्वप्नदर्शी केपी ओली जन्मनु पर्छ भन्नु भएको विषय यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । के भन्न खोज्नु भएको हो ? हाम्रो समाजमा अझै यथास्थितिमा रम्न चाहने प्रवृत्ति हावी छ । परिवर्तनको कुरा गर्नेहरू पनि यथास्थितिको सीमाभन्दा बाहिर जान चाहँदैनन् । फरक र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोज्ने कुरामा समेत जोखिम देख्छन् । जसले वास्तवमै परिवर्तनको कुरा गर्छ र आफ्नो सोचलाई योजनाका रुपमा अगाडि बढाउन खोज्दछ, यहाँ त्यसलाई हावादारी र दुस्साहसी भन्ने गरिन्छ तर समाज परिवर्तनका लागि सपना देख्नु र त्यसलाई योजनामा ढाल्नु अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिमा झैँ उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा पनि केपी ओली झैँ नयाँ सपना देख्ने र देखाउनेहरू अगाडि आउनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेकपा स्थायी समितिको बैठक स
Dec172018 by DangkhabarNo Comments
गोविन्द खड्का/हजारीका माला, खादा, दोसल्लाह गलाभरी थिए । धेरै जनाले लगाईदिएको टिकाले निधार अविरमय देखिन्थ्यो । टेवुलमा बसालेको टोपिले शिरमा मायाको चिनो श्वरुप नयाँ टोपि लगाएकोे बुझाउँथ्यो । टेवुलमा मायाको चिनो टलक्कै टल्किएको फोटो सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले विदाईका तस्विर आफ्नो फेस वुक पेजमा पेष्ट गर्नुभयो । त्यसमा शुभयात्राका औपचारीक शब्दहरु धेरैले खर्च गरे । यो आलेख तयार पार्दा सम्म सात सय १४ जनाले लाईक गरेका थिए । एक सय ५० जनाले कमिन्ट र तिन जनाले तस्विर शेयर गरेका थिए । यसरी सामाजिक सन्जाल मार्फत सुभेच्छा प्रकट गर्नेहरु एक हजारका हारा हारीमा छन् । यसलाई प्रमुख मुद्धा बनाएर मात्रै मैले टिप्पनी गर्न खोजको होईन । लेख्नकैलागि मलाई भित्रै देखि प्रभावित पारेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठको खुला हुने शैलिले हो । उहाँले फोटो संगै पोष्ट गर्नुभएको स्टाटस मा १७ महि
Dec112018 by DangkhabarNo Comments
टीका बस्नेत-आज फेरि नजानिँदो किसिमले मन भारी भइरहेको छ , विगतले आफैलाई झस्काइरहेको छ । एकतमासले मन बिथोलिँदै छ । स्मृतिको क्यानभासभित्र विगत सल्वलाइरहेको छ । सडकमा भौंतारिदै छु । किनकिन आज मलाई घोराही बजार निकै उदार र उराठिलो लाग्दैछ । सधैँझैं चलह–पहल देखिने तुलसीपुर चोक किनकिन आज सुनसान ठान्दैछ यो मन । उता परबाट एउटा किशोर भाइ चिच्याउँदैछ– ए दाइ यता–यता । कहाँ जाने तपाई ? बस्, यस्तै छ यहाँको परिवेश । मानिसको दैनिकी पनि कति विचित्र किसिमको छ है । मान्छे बाँचुञ्जेल सर्वविजेता ठान्छ आफूलाई, आफ्नो कामलाई, अनि आफ्नो कर्तव्यलाई । र त दिनरात लागिरहन्छ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्र्न । जब मानिसले प्राणपखेरु छाड्छ, जान्छ कहिल्यै नफर्कने गरी अन्तै कताकता, तबमात्र उसको महत्व झल्कन्छ समाजमा, उसले देखाएको बाटोमा हिड्न आवस्यक ठान्छ समाज । समाज वनावटी रुपमा मात्र उसको अस्तित्व स्वीकार्छ, समाजमा उसले ग